Yewu a Ɛhe na Yɛkɔ? Obi Wu a Ɔkɔtena Baabi?
KENKAN WƆ Abbey Abui Acholi Alur American Sign Language Amharic Angolan Sign Language Arabic Argentinean Sign Language Armenian Ateso Attié Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Betsimisaraka (Southern) Bislama Bolivian Sign Language Boulou Bété Cambodian Chavacano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chopi Chuabo Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Cuban Sign Language Damara Dangme Douala Dusun Efik English Estonian Ewe Fante Fijian Fon French Ga Guadeloupean Creole Guarani Guarani (Bolivia) Gun Guéré Haitian Creole Hausa Herero Hindi Hunsrik Iban Ibinda Igbo Indian Sign Language Irish Javanese Jula Kabuverdianu Kannada Karen (S'gaw) Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Kpelle Krio Kurdish Kurmanji Kwangali Kwanyama Kyangonde Lamba Lhukonzo Lingala Lomwe Luganda Lunda Luo Macua Malagasy Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Marathi Mauritian Creole Mazahua Mbunda Meru Moore Myanmar Navajo Ndau Ndebele Ndonga Ngangela Nias Nigerian Pidgin Nyungwe Nzema Okpe Oromo Otetela Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Quechua (Ayacucho) Quichua (Imbabura) Quichua (Santiago del Estero) Romanian Romany (Eastern Slovakia) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Runyankore Russian Rutoro Réunion Creole Samoan Sango Sena Sepedi Seychelles Creole Sidama Silozi Sinhala Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swati Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Thai Thai Sign Language Tigrinya Tiv Tongan Tshwa Turkish Twi Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Vezo Vietnamese Wallisian Wolaita Yacouba Zande Zulu
1-3. Obi wu a, nsɛm bɛn na nkurɔfo taa bisa, na nkyerɛkyerɛmu bɛn na ɔsom ahorow de ma?
BIBLE ka sɛ ebedu bere bi na “owu nni hɔ bio.” (Adiyisɛm 21:4) Yeduu Ti 5 no, yehui sɛ agyede no betumi ama yɛanya daa nkwa. Nanso wu ara na nnipa rewu. (Ɔsɛnkafo 9:5) Wei nti obi wu a yɛtaa bisa sɛ, ‘Yewu a ɛhe na yɛkɔ?’
2 Sɛ yɛn ho nnipa bi wu a, ɛde adwennwene bɛto yɛn so ma yebisa sɛ: ‘Ɛhe na ɔkɔ? Ohu nea ɛrekɔ so? Obetumi aboa yɛn anaa? Yebehu no bio?’
3 Ɔsom biara ne nea ɛka wɔ asɛm yi ho. Ebinom se woyɛ papa a, wobɛkɔ ɔsoro, na woyɛ bɔne a wobɛkɔ hell anaa Ɔbonsam gya mu. Ebi nso gye di sɛ obi wu a, ɔdan honhom kɔ nananom a wɔawu nkyɛn. Afoforo nso kyerɛ sɛ, sɛ obi wu na wobu no atɛn a, obetumi aba ama wɔawo no bio sɛ nipa foforo anaa aboa mpo.
4. Yɛhwɛ nea ɔsom ahorow ka fa owu ho no a, adwene bɛn na ɛwɔ akyi?
4 Wohwɛ a wobɛka sɛ ɛsono nea ɔsom biara ka wɔ owu ho. Nanso yɛreka paa a, asɛm a wɔreka nyinaa yɛ baako. Ɛne sɛ onipa wu a, biribi te ne mu a ɛno de enwu. Nanso yemmisa sɛ asɛm yi yɛ nokware?
5, 6. Yewu a ɛhe na yɛkɔ?
5 Yehowa deɛ, onim tebea a onipa wu a ɔkɔ mu. Ose onipa wu a na wawu; ɔnkɔ baabiara. Yɛka sɛ obi awu a, nea ɛkyerɛ ara ne sɛ onni nkwa mu bio. Enti owufo nte biribiara nka, na ɔnkae hwee na kampɛsɛ wakɔtena baabi. * Sɛ yewu a, yenhu ade, yɛnte asɛm, na yentumi nnwen bio.
6 Ɔhene Solomon kyerɛwee sɛ: “Awufo de, wonnim biribiara.” Nea wawu ntumi nnɔ obi anaa ɔntan no, na “adwuma ne adwene ne nimdeɛ ne nyansa biara nni Adamoa mu.” (Kenkan Ɔsɛnkafo 9:5, 6, 10.) Afei nso, Dwom 146:4 ka sɛ obi wu a, “ne nsusuwii” nyinaa yera.
Yehowa bɔɔ yɛn sɛ yɛntena asase so daa
7. Dɛn na Yesu ka faa owu ho?
7 Bere a Yesu adamfo Lasaro wui no, Yesu ka kyerɛɛ n’asuafo no sɛ: “Yɛn adamfo Lasaro ada.” Ka a Yesu kae sɛ Lasaro ada no nkyerɛ sɛ ɔregye n’ahome kɛkɛ. Efisɛ ɔsan kae sɛ: “Lasaro awu.” (Yohane 11:11-14) Enti ɔde owu totoo nna ho. Bio Yesu anka sɛ Lasaro wɔ soro anaa ɔkɔ ne nananom a wɔawuwu nkyɛn. Wanka nso sɛ Lasaro rehu amane wɔ Ɔbonsam gya bi mu, anaa ɔreba ama yɛawo no bio sɛ onipa anaa aboa. Ɛte sɛ nea na Lasaro ada hatee. Bible no fã foforo nso de owu toto obi a wada hatee ho. Obi te sɛ Stefano sei, bere a wokum no no, Bible ka sɛ “ɔdae wɔ owu mu.” (Asomafo Nnwuma 7:60) Ɔsomafo Paulo nso kyerɛwee sɛ Kristofo bi “adeda wɔ owu mu.”—1 Korintofo 15:6.
8. Dɛn na ɛma yehu sɛ na Onyankopɔn mpɛ sɛ yewu?
8 Onyankopɔn bɔɔ Adam ne Hawa sɛ wɔntena ase nkosi bere bi na akyiri yi wonwu anaa? Dabi! Yehowa bɔɔ wɔn sɛ nnipa a wɔwɔ ahoɔden, na na wɔbɛtena ase daa ama wɔn ani agye. Afei Yehowa de daa nkwa hyɛɛ wɔn komam, enti nnipa mpɛ sɛ wowu. (Ɔsɛnkafo 3:11) Hena na ɔwo mma a, ɔpɛ sɛ ne mma no nyin bɔ nkwakoraa ne mmerewa na wowu? Ɔwofo biara nni hɔ a n’ani begye ho saa. Yehowa nso mpɛ sɛ biribi saa to yɛn. Sɛ Onyankopɔn pɛ sɛ yɛtena ase daa a, ɛnde adɛn nti na yewu?
ADƐN NTI NA YEWU?
9. Mmara a Yehowa de maa Adam ne Hawa no, adɛn nti na yebetumi aka sɛ na ɛmmoro wɔn so?
9 Yehowa ka kyerɛɛ Adam wɔ Eden turom hɔ sɛ: “Turom ha nnua nyinaa, di bi. Na papa ne bɔne ho nimdeɛ dua no de, nni bi, efisɛ da a wubedi bi no, owu na wubewu.” (Genesis 2:9, 16, 17) Ná mmara no mu da hɔ na na ɛnyɛ den. Afei nso, Yehowa ne obi a ɛsɛ sɛ ɔkyerɛ Adam ne Hawa papa ne bɔne. Sɛ wodi Yehowa mmara so a, ɛbɛkyerɛ sɛ wobu no na wogye tom sɛ ɔno na ɔfata sɛ odi wɔn so. Bio nso ɛbɛkyerɛ sɛ wɔn ani sɔ nea Yehowa ayɛ ama wɔn nyinaa.
10, 11. (a) Ɔkwan bɛn na Satan faa so nyaa Adam ne Hawa? (b) Adɛn nti na yebetumi aka sɛ nea Adam ne Hawa yɛe no yɛ anidaho bɔne?
10 Nea ɛyɛ yaw ne sɛ, Adam ne Hawa antie Yehowa. Satan bisaa Hawa sɛ: “Ɛyɛ ampa sɛ Onyankopɔn kae sɛ munnni turo yi mu dua biara so aba?” Hawa yii ano sɛ: “Yetumi di turo yi mu nnua so aba. Na mmom dua a esi turo no mfinimfini no aba de, Onyankopɔn aka sɛ, ‘Munnni bi, na mommfa mo nsa nnka na moanwu.’”—Genesis 3:1-3.
11 Satan nso ka kyerɛɛ Hawa sɛ: “Ɛnyɛ owu na mubewu. Na Onyankopɔn nim sɛ da a mubedi bi no mo ani bebue na moayɛ sɛ Onyankopɔn ahu papa ne bɔne.” (Genesis 3:4-6) Ná Satan pɛ sɛ Hawa nya adwene sɛ ɛnsɛ sɛ ɔtena hɔ ma obi kyerɛ no nea eye ne nea enye, na mmom ɔno ara betumi ayɛ nea ɔpɛ. Afei nso Satan dii atoro kyerɛɛ Hawa; wamma wanhu nea ebefi asoɔden no mu aba. Satan ka kyerɛɛ Hawa sɛ ɔrenwu, enti Hawa dii aduaba no bi, na akyiri yi ɔmaa ne kunu bi dii. Ná Adam ne Hawa nim paa sɛ Yehowa aka sɛ ɛnsɛ sɛ wodi aduaba no. Enti di a wodii no kyerɛ sɛ wɔboapa buu wɔn ani guu Yehowa mmara no so. Wei ma yehu sɛ na wommu wɔn soro Agya a ɔdɔ wɔn no. Nea wɔyɛe no yɛ anidaho bɔne.
12. Adɛn nti na yebetumi aka sɛ Adam ne Hawa hyɛɛ Yehowa awerɛhow paa?
12 Nea yɛn nana Adam ne Hawa yɛe no, na obu nnim koraa. Hwɛ sɛnea ɛbɛhyɛ Ɔbɔadeɛ no awerɛhow! Sɛ wo na woatete wo babarima ne wo babea kama na wɔtew atua kɔbɔ bra bɔne a, anka wobɛte nka sɛn? Anka ɛrenyɛ wo yaw anaa?
Adam fi dɔte mu, na dɔte mu na ɔsan kɔe
13. Bere a Yehowa ka kyerɛɛ Adam sɛ “dɔte mu na wobɛsan akɔ” no, na ɔrepɛ akyerɛ sɛn?
13 Asoɔden a Adam ne Hawa yɛe nti, wɔhweree anidaso a wɔwɔ sɛ wɔbɛtena ase daa no. Yehowa ka kyerɛɛ Adam sɛ: “Woyɛ dɔte na dɔte mu na wobɛsan akɔ.” (Kenkan Genesis 3:19.) Wei kyerɛ sɛ Adam bɛsan ayɛ dɔte sɛnea onnya mmaa wiase no na ɔte no. (Genesis 2:7) Adam yɛɛ bɔne no, owui, wankɔ baabiara.
14. Adɛn nti na yewu?
14 Sɛ Adam ne Hawa tiee Onyankopɔn a, anka wɔda so te ase. Nanso wɔantie no; wɔyɛɛ bɔne na wowui. Bɔne ayɛ sɛ yare kɛse bi a yɛn nana Adam ne Hawa de asan yɛn. Wɔde bɔne awo yɛn nyinaa, enti na yewu. (Romafo 5:12) Nanso Onyankopɔn ammɔ nnipa sɛ wonwu; Bible frɛ owu mpo sɛ “ɔtamfo.”—1 Korintofo 15:26.
NOKWARE NO MA YƐDE YƐN HO
15. Sɛ yehu nokwasɛm a ɛfa owu ho a, ɛboa yɛn sɛn?
15 Nokwasɛm a ɛfa owu ho no ma yɛde yɛn ho fi atosɛm ho. Bible kyerɛ yɛn sɛ awufo nte yaw na wonni awerɛhow. Yɛrentumi ne wɔn nkasa, na wɔn nso ntumi ne yɛn nkasa. Yɛrentumi mmoa awufo na wɔn nso ntumi mmoa yɛn. Wɔrentumi nyɛ yɛn bɔne, enti ɛnsɛ sɛ yesuro wɔn. Ne nyinaa akyi no, asɔre pii ka sɛ obi wu a, ɔkɔtena baabi, na yebetumi atua sika ama asɔfo anaa nyame nipa bi ama wabɔ mpae ama no. Nanso sɛ yenim nea Bible ka fa owu ho a, obiara ntumi mfa saa nsɛm no nnaadaa yɛn.
16. Awufo ho atosɛm bɛn na asɔre pii kyerɛkyerɛ?
16 Satan pɛ sɛ ɔde atoro som daadaa yɛn ma yenya adwene sɛ awufo da so te ase. Enti asɔre pii kyerɛkyerɛ sɛ yewu a, biribi te yɛn mu a efi kɔtena baabi foforo. Wo nso ɛ? Saa na w’asɔre kyerɛkyerɛ, anaa nea Bible aka na wɔkyerɛkyerɛ? Satan de atosɛm na ɛtwe nkurɔfo fi Yehowa ho.
17. Adɛn nti na ɛyɛ asefem sɛ nkurɔfo bɛka sɛ Yehowa bɛhyew nnipa wɔ Ɔbonsam gya mu?
17 Nyamesomfo pii wɔ hɔ a wɔn nkyerɛkyerɛ yɛ asefem. Ebinom ka sɛ wɔde abɔnefo begu Ɔbonsam gya mu ahyew wɔn daa. Saa asɛm no yɛ atosɛm a egu Yehowa anim ase. Ɔremma nnipa nhu amane saa da! (Kenkan 1 Yohane 4:8.) Wuhu sɛ obi de abofra bi nsa ahyɛ gya mu sɛ ɔde retwe n’aso a, wobɛte nka sɛn? Nea wobɛka ara ne sɛ ne tirim yɛ den, na w’ani rennye ho mpo sɛ wobɛbɛn no. Saa pɛpɛɛpɛ na Satan pɛ sɛ yehu Yehowa.
18. Adɛn nti na ɛnsɛ sɛ yesuro awufo?
18 Nyamesomfo bi ka sɛ onipa wu a, ɔdan honhom. Wɔkyerɛkyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ yedi awufo ni na yesuro wɔn efisɛ wɔyɛ ahonhom; wobetumi abɛyɛ yɛn nnamfo paa anaa atamfo a wɔn ho yɛ hu. Nnipa pii gye atosɛm yi di. Ɛno nti wosuro awufo, na wɔsom wɔn sen sɛ wɔbɛsom Yehowa. Nanso kae hu sɛ obi wu a, na wawu; ɔnte hwee. Enti ɛnsɛ sɛ yesuro awufo. Yehowa na ɔbɔɔ yɛn. Afei nso ɔno ne nokware Nyankopɔn, na ɔno nko ara na ɛsɛ sɛ yɛsom no.—Adiyisɛm 4:11.
19. Sɛ yehu nea Bible ka fa owu ho a, ɛboa yɛn sɛn?
19 Nea Bible ka fa owu ho a yebehu no ma yɛde yɛn ho fi atoro nkyerɛkyerɛ ho. Afei nso Yehowa ahyɛ bɔ sɛ ɔbɛma yɛanya nkwa ne anigye daakye. Enti sɛ yehu nokwasɛm a ɛfa owu ho a, ɛma yɛte saa bɔhyɛ no ase.
20. Dɛn na ti a edi hɔ no bɛka ho asɛm?
20 Bere bi Onyankopɔn somfo Hiob bisae sɛ: “Sɛ ɔbarima wu a, ɔbɛtena ase bio?” (Hiob 14:14) Enti ɛyɛ ampa sɛ onipa wu a, obetumi atena ase bio? Nea Onyankopɔn aka wɔ Bible mu no ka koma paa. Ɛno na yɛbɛka ho asɛm wɔ ti a edi hɔ no mu.
^ nky. 5 Ebinom gye di sɛ obi wu a, ɔkra anaa honhom bi wɔ ne mu a enwu. Sɛ wopɛ wei ho nsɛm pii a, hwɛ Nsɛm Bi Mu Nkyerɛkyerɛmu 17 ne 18.
NOKWASƐM 1: ONIPA WU A NA WAWU; ƆNKƆ BAABIARA
“Awufo de, wonnim biribiara.”​—Ɔsɛnkafo 9:5
Dwom 146:3, 4; Ɔsɛnkafo 9:6, 10
Sɛ yewu a, yenhu ade, yɛnte asɛm, na yentumi nnwen bio.
Yesu de owu totoo nna ho.
NOKWASƐM 2: ƐNYƐ YEHOWA PƐ NE SƐ NNIPA BEWU
“Papa ne bɔne ho nimdeɛ dua no de, nni bi, efisɛ da a wubedi bi no, owu na wubewu.”​—Genesis 2:17
Satan dii atoro kyerɛɛ Hawa; wamma wanhu nea ebefi asoɔden no mu aba. Adam ne Hawa antie Yehowa, enti wɔyɛɛ bɔne na wowui.
Adam wui no, na onni baabiara bio.
Bɔne ayɛ sɛ yare kɛse bi a yɛn nana Adam ne Hawa de asan yɛn. Wɔde bɔne awo yɛn nyinaa, enti na yewu.
1 Korintofo 15:26
Bible frɛ owu ɔtamfo.
NOKWASƐM 3: NOKWASƐM A ƐFA OWU HO NO MA YƐDE YƐN HO
“Sɛ ɔbarima wu a, ɔbɛtena ase bio? . . . Mɛtwɛn akosi sɛ me home bɛba.”​—Hiob 14:14
Sɛ yehu nokwasɛm a ɛfa owu ho a, atosɛm bɛn na yɛde yɛn ho fi ho?
Ebinom ka sɛ wɔde abɔnefo begu Ɔbonsam gya mu ahyew wɔn daa. Saa nkyerɛkyerɛ no gu Yehowa anim ase. Ɔremma nnipa nhu amane saa da.
Nnipa pii suro awufo, na wɔsom wɔn sen sɛ wɔbɛsom Yehowa. Afei nso, ɔno ne nokware Nyankopɔn, na ɔno nko ara na ɛsɛ sɛ yɛsom no.
Nneɛma nnan a ɛbɛtumi aboa wo ma woayi wɔn nsɛmmisa ano na sɛ wɔn dɔfoɔ bi wu a, wɔatumi agyina ano.